Game Forge: Kupfuura Kungori Mitambo paForge - Gamepoint - Bhodhi uye Vhidhiyo Mitambo
Yakatumirwa ne Jonas Dammen | Kurume 14, 2022 | Mitambo yebhodhi nemakadhi, crowdfunding, Misoro Yakaisvonaka, nhau
Mapurojekiti mashanu arikumhanya mumutambo wefoge. Mapurojekiti maviri atoratidzwa pano asvika pachinangwa chavo, mamwe maviri achiri kuunganidza kuchinangwa chavo uye chirongwa chimwe chete hachizi chemutambo.
Stress Botics uye Roll Kamera! vose vakazadzisa zvinangwa zvavo. Vapfuri vanofarira vachiri nemazuva maviri kana gumi ekutsigira chirongwa ichi. Nyowani imwezve Elf Creek Mitambo zita, iyo yeGerman vhezheni iri zvakare kubva kuSkellig Mitambo, uye yekufungidzira kadhi mutambo wevatambi vaviri. Iyo quintet yemapurojekiti arikuenderera inopedzwa neprojekiti yakatangwa nekambani yemutambo pachayo.
Vatengesi veMugwagwa Wakasviba: Vatengesi vakashinga munzira dzine rima
Rimwe zita, Vatengesi veRima Road, iro rakatsikiswa muChirungu neElf Creek Games, rakaburitswa mushanduro yechiGerman neSkellig Games. Vatambi vanotora chinzvimbo chevatengesi vakashinga vanovimbisa kupihwa kwemaguta mumwaka werima. Uku kuita kune njodzi, asi mukurumbira uye hupfumi zvakamirira. Pakutendeuka kwavo, vanoita nhanho ina dzokuronga nzira, kuongorora guta, kugadzirira karavhani uye kugadzirira ramangwana. Mutambo weatmospheric strategy wakakodzera vatambi 1-4, unotora maminetsi ari pakati pe60 ne120 uye unokurudzirwa kune makore gumi nemaviri zvichikwira.
Nemazuva makumi maviri nemaviri iyo chirongwa ichi chichiri kushanda, ingangoita makumi mashanu muzana emari yekutarirwa ye22 euros yakatosvikwa.
Ngano ndezvechokwadi: Fantasy 2-player kadhi mutambo
Mumutambo uyu, vatambi vanotora chinzvimbo chemutungamiriri pamusoro pechikwata chezvisikwa zvishanu. Marudzi maviri anopokana kune rimwe divi imhuka yemusango asi inonzwisisika uye zvisikwa zvemumvuri zvinobva mundege isinganzwisisike pakati penyika dzese. Mutambo wemakwikwi emakadhi anosanganisa zvinhu kubva munzvimbo dzakasiyana. Iko kugona kushongedza zvisikwa zvako zvirinani kuyeuchidza yemitambo yekutamba-yekutamba. Iwo ma mechanics emutambo anoyeuchidza nezveanozivikanwa ekutengesa makadhi emitambo, kunyangwe kudzika kwehurongwa kwakada kufanana ne chess. Tales are Real mutambo wakachena wevanhu 2 unotora anenge maminetsi makumi matatu uye unokurudzirwa kune makore gumi nemana zvichikwira.
Nenguva yasara yemazuva masere, chinangwa cheEUR 8.500 parizvino chiri makumi mana muzana.
Chimwe chinhu chakakosha parizvino chiri kugadzirwa neHappyShops pachayo. Mabheji anomonereka anoshandiswa pamitambo yekutengeserana kana zviitiko zvepadandemutande anoshandiswa kugadzira mabhegi anosonerwa mumusangano wevakaremara. Chirongwa ichi chichiri kushanda kwemazuva makumi maviri nemaviri, asi mabhegi ese parizvino atengeswa. Replenishment inofanira kusvika gare gare svondo rino. Mabhegi anowanikwa mumhando mbiri. Kune rumwe rutivi kune bhegi rekutenga (W 22 x H 45 x W 30 cm) uye rudzi rwechipiri ibhegi repafudzi (W 15 x H 30 x D 35 cm), rimwe nerimwe rakashongedzwa nemaitiro asina kujairika kubva munyika ye mitambo yebhodhi.
KOSMOS 680565 Iyo Adventures yeRobin Hood, akasarudzwa kumutambo ... * 36,99 EUR tenga
Kare Nyika yeWarcraft: Hasha dzeLich King bhodhi mutambo wongororo
Inotevera CCXP Cologne 2022 yakabviswa: "Tarisa gore negore"
Egore evhidhiyo machati 2020: Iyo yakanyanya kutariswa DVD uye Blu-ray mafirimu
Monster Hunter: Makwikwi epasirese ePC
Kuburitswa kwaMambo Arthur: Knight's Tale yakamiswa